Budada ugu fiican ee Alpha GPC (28319-77-9) Warshad soo saare wax soo saare
Cofttek waa soosaaraha budada Alpha GPC ee ugu fiican Shiinaha. Warshadeena waxay leedahay nidaam maareyn wax soo saar oo dhameystiran (ISO9001 & ISO14001), oo leh awood wax soo saar bille ah 3000kg.
Alpha GPC (28319-77-9) fiidiyaha
Alpha GPC budada Smamnuucista
xagiisayna 50% budada non-hygroscopic ； 50% & 99% budada ； 85% dareeraha
Miisaanka kelli: 257.223 g / mol
Dhibcaha Biyaha: 142.5-143 ° C
Magaca kiimikada: Alpha GPC; Choline Alfoscerate; Alpha Glycerylphosphorylcholine
micne ah: (R) -2,3-dihydroxypropyl (2- (trimethylammonio) ethyl) fosfil; sn-Glycero-3-phosphocholine
Kala badh: saacadood 4-6
Codsiga: Alpha GPC (Choline Alfoscerate) waa fosfoosik, horudhaca choline biosynthesis iyo dhex dhexaadka wadada catabolic ee phosphatidylcholine. Alpha GPC waxaa loo isticmaalaa Nootropic.
Waa maxay Alpha GPC (28319-77-9)?
Alpha GPC waa Nootropic Compound oo caan ku ah hagaajinta waxqabadka jirka iyo kobcinta shaqada maskaxda. Alpha gpc nootropic waxay u dhacdaa inay noqoto mid ka mid ah ilaha ugu waxtarka badan ee choline; kaasoo waxtar u leh jirkeena, maadaama loo isticmaalo sameynta neurotransmitter-ka caawiya xusuusta iyo murqaha oo foosha.
Alpha GPC waa awood ku filan oo loo isticmaali karo daawo ahaan, hase yeeshee jilicsan oo ku filan in loo isticmaalo kaabis ahaan. Waxaa lagu yaqaan inay hagaajiso xusuusta iyo soo saarida awooda maskaxda. Tan ka dib, waxaa loo arkaa inay tahay kaabis nafaqo leh oo rajo leh oo loogu talagalay cayaaraha, iyo qof kasta oo kale oo doonaya inuu caawiyo maskaxdooda isla mar ahaantaana kobciya xoogooda jir ahaaneed.
Alfa GPC (28319-77-9) dheefaha
Maskaxda maskaxda ee loo yaqaan 'Alpha maskaxda nootropic' waxaa si weyn loogu yaqaanaa horumarka garashada sababta oo ah awoodda ay u leedahay inay maskaxda gaadho, taas oo suurtogal ka dhigaysa qaabkeeda choline. Inta badan Alpha GPC waxay isticmaashaa diiradda saara maskaxda iyo murqaha. Baadhitaan nootropic nootropic nootropic oo la soo galiyay khadka internetka oo uu soo maray isticmaale khibrad leh ayaa cadeeyay in dawadan ay tahay mid waajib ku ah qof kasta oo doonaya inuu kor u qaado shaqadiisa maskaxeed.
Daraasadaha ayaa cadeeyay in hormoonka alpha gpc-ga uu wax ku ool yahay kordhinta wax soo saarka jirka ee jirka ka dib lix maalmood oo dheeri ah. Sidaa daraadeed, xiiseeyayaasha jimicsiga iyo ciyaartooyda ayaa ka fiirsan kara ku darista budada Alpha GPC cuntadooda si kor loogu qaado waxqabadka muruqdooda iyo kor u qaadida awoodooda isometric Nidaamka jimicsiga ee Alpha gpc wuxuu muujiyey inuu uqaato wax qabad jireed heer cusub oo ka dhex jira rag badan oo isboorti.
Horumarinta daraasadda waxay soo jeedineysaa in qaadashada 1200 mg ee maskaxda maskaxda nootropic maalintii si macno leh u wanaajiso xirfadaha aqooneed ee bukaanka Alzheimers ee 3 illaa 6 bilood ee daaweynta. Waxaa sidoo kale la rumeysan yahay in qaadashada 1000 mg ee Alpha GPC maalin kasta tallaal ahaan ay gacan ka geysato hagaajinta astaamaha waallida xididdada dhiigga. Alpha gpc dopamine sidoo kale waxay hagaajisaa niyadda bukaanka, dabeecadda, iyo xirfadaha aqooneed.
Alpha GPC (28319-77-9) isticmaal?
Alpha GPC (28319-77-9) qiyaasta
Qiyaasta Alfa GPC waxay ku kala duwantahay qof ilaa kan ku xiga, iyadoo kuxiran ujeeddooyinka ay u leeyihiin qaadashada. Si kastaba ha noqotee, kiisaska intooda badan, qiyaasta lagu taliyey ee Alpha GPC qiyaasta qofka celcelis ahaan waa 300 milligrams ilaa 600 milligram.
Si kastaba ha noqotee, ciyaartooyda, qiyaasta caadiga ah waa 600mgs. Tani waa sababta oo ah waxay ujeedadoodu tahay koritaanka dheecaanka hoormoonka, kor u qaadida heerarkooda tamar iyo muruqyada adag.
Dadka la kulma astaamaha hoos u dhaca garashada waxay leeyihiin qiyaasta Alpha GPC oo kala duwan in kastoo. Qiyaastooda ayaa loo qaybiyaa saddex nooc oo kala duwan oo ah 400mg midkiiba, taasoo ka dhigaysa wadar dhan 1200mgs maalintii.
Baadhitaan la sameeyay ayaa muujinaya in maamulka afka laga qaato ee Alpha GPC ay tahay midda ugu waxtarka badan marka la qaato qiyaas ahaan 300miligrams illaa 600 milligram. Waxaa lagu talinayaa qofka qaadanaya kabitaanka markii ugu horeysay inuu ku bilaabo qiyaasta 300-600 kahor qaadashada qiyaasta sare.
Dadka waaweyn, qiyaasta isku celceliska qiyaasta Alfa GPC ee qiyaasta qiyaasta maalin kasta waa 300-1200mg, iyadoo la doorbidayo in lagu qaato hal ama laba qaadasho. Ku-qaadashada kaalmooyinka qiyaasta lagu taliyay waxay muhiim utahay nabadgelyadaada. Ka sokow, kabitaanku waa mid waxtar badan marka qiyaasta habboon la raaco.
Alpha GPC budo for sale(Xagee laga iibsadaa budada Alpha GPC)
Waxaan nahay bixiye alpha GPC oo khibrad u leh sanado dhowr ah, waxaan soo bandhignaa alaabada qiimo tartan ah, wax soo saarkeenuna wuxuu leeyahay tayada ugu sarreysa wuxuuna ku socdaa tijaabooyin adag, madax-bannaan si loo hubiyo inay aamin u tahay isticmaalka adduunka oo dhan.